अमेरिकालाई अर्को चिठी लेखेर एसपीपीबाट नेपाल बाहिरिनुपर्छ
२०७९ असार ३ गते
काठमाडौँ । अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम(एसपीपी) कार्यक्रम जस्तो सुनिएको छ । जे जानकारीमा आएको छ । ती कुराहरु सुन्दा र बुझ्दा यसमा नेपाल संलग्न हुनु हुँदैन । तर, यसको अर्थ यो होइन कि नेपालले अमेरिकासँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध अघि बढाउनु हुँदैन । अमेरिका, चीन, भातर, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, रुस, जापानलगायत सबै देशसँग नेपालले मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय तथा वैदेशिक सम्बन्धहरु विकास गर्दा धेरै होसियार भएर अघि बढ्नुपर्छ । एसपीपी कार्यक्रममा भने नेपाल सहभागी हुनु नेपालको हितमा छैन ।
सबैभन्दा पहिला त नेपालमा एसपीपी कहाँबाट, कसरी र कहिले सुरु भयो ? सुरु हुँदा यो कार्यक्रम वा सहकार्यको स्वरुप के थियो । अहिले के स्वरुप छ । पहिलो औपचारिक चिठी कसले लेख्यो । सेनाले पनि सरकारकै सहमतिमा चिठी लेखेको बताइरहेको छ । त्यसाे हाे भने सरकारले दिएको सहमति पत्र पनि सेनाले बाहिर ल्याउनु पर्छ । चिठी लेख्ने बेलामा नेपालको प्रतिबद्धता के-के हुनुपर्छ भनिएको थियो । नेपालले के कस्तो प्रतिवद्धता जनाएको थियो । यी सबै विषय बाहिर ल्याउनु पर्छ । सरकार र सेनाले नेपाली जनता र संसदलाई समेत अन्योलमा राख्न मिल्दैन । किनभने सरकारकै भनाइहरु पटक पटक बाझिएर आएका छन् । एउटा मन्त्रीले एउटा कुरा भनेका छन् । अर्को मन्त्रीले अर्को कुरा भनेका छन् । सेनाले एक पटक एउटा, अर्को पटक अर्कै कुरा गरेको छ । संसदमा गृहमन्त्री र कानुमन्त्रीले संसदमा त्यस्तो चिठी लेखिएको छैन भन्नु भयो । तर, चिठी लेखिएको रहेछ । हिजाे बिहीबार मात्र बाहिरियाे । यसबारे प्रधानमन्त्री आफैँ पनि यसबारे संसदमा गएर जवाफ दिन हिचकिचाइरहेका छन् ।
सन् २०१५ मा नेपालले चिठी लेख्दा अमेरिकाको तर्फबाट के भएको थियो । कुन पृष्ठमूमिमा नेपालले चिठी लेख्यो ? अमेरिकाको यो कार्यक्रमबारे नेपालले कसरी थाहा पायो । सेनाले सरकारकै लिखित सहमतिमा अमेरिकालाई चिठी लेखेको हो भने सरकारको सहमति पत्र कहाँ छ भनेर सेनाले देखाउनु पर्छ । २०१७ मा पनि चिठी लेखेको भनिएको छ । उक्त चिठी कहाँ छ ? देखाउनु पर्छ ।
सत्य र तथ्य गोलमटोल गरेर जनता, संसद र सबैलाई झुक्याउन पाइँदैन । फलानो प्रधानमन्त्री भएका बेला गरेको हो, त्यसलाई हामीले अघि बढायौँ भन्न पनि मिल्दैन । अर्को कुरा यो विषय भविष्यमा पनि नदोहोरियोस् भनेर हामीले ध्यान दिनु आवश्यक छ । देशको सार्वभौमिक स्वतन्त्रतालाई जोगाउन यी सबै आपत्तिजनक विषयलाई बाहिर ल्याउनु पर्छ । यसबारे सरकारले स्वेतपत्र नै जारी गरेर सत्य तत्य र वस्तुस्थितिलाई प्रष्ट पार्नुपर्छ ।
जो प्रधानममन्त्री वा परराष्ट्र मन्त्री हुँदा गरिएको भए पनि यो गलत क्रियाकलाप नेपाल सरकारले गरेको हो । त्यसो हुँदा यसबाट हामी बाहिर निस्किनु पर्छ । अमेरिकीहरू स्वयंले पनि नेपाल एपीपीमा संलग्न हुन चाहँदैन भने चिठी लेखेर बाहिर निस्किन पनि सक्छन् भनेर भनिरहेकै छन् । त्यसो हुँदा पहिले यसमा सहभागी हुन चिठी लेखेकाे हाे भने नेपालले फेरि अर्काे चिठी लेखेर एसपीपीबाट बाहिर निस्किनु पर्छ । (मकालु खबरसँगकाे कुराकानीमा आधारित)
माओवादी केन्द्रीय समिति बैठक : सांगठनिक अराजकता हटाउनेदेखि आगामी योजनासम्म
एमालेभित्रको अन्तर्घात छानबिन गर्न विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा कार्यदल
अर्थ मन्त्रालयले मिच्यो कानुन : ३ महिनासम्म मेट्न नपाइने सिसिटिभी फुटेज १३ दिनमै चैट
बजेट भाषणको अघिल्लो दिनकाे सीसीटीभी फुटेज मेटिएकाे अर्थ मन्त्रालयकाे दाबी
‘सञ्चार क्षेत्रका लागि सुरक्षित कार्यस्थल निर्देशिका, २०७९’ ल्याउने तयारी
माओवादी बैठकमा उठ्यो गठबन्धन गर्न नहुने आवाज, चुनाव चिह्न बिर्सिने अवस्था आएको दुखेसो
एसपीपी खारेजीबारे सरकारले अझै पठाएन अमेरिकालाई पत्र